Firenena tsy misy Visa ho an'ny olom-pirenena Singapore - ALinks
Ny fepetra takian'ny visa ho an'ny olom-pirenena ao Singapore dia ny fetran'ny fidiran'ny governemanta Singapore ho an'ireo manana Passports Singapore. Ny isan'ny fifanarahana fanavotana visa nosoniavina niaraka tamin'i Singapore dia mahatonga ny pasipaoro Singapore faha-2 amin'ny resaka fahalalahana visa araka ny voalaza ao amin'ny Index Henley Passport.
Izy io dia iray amin'ireo pasipaoro efatra mamela anao hiditra amin'ny toekarena lehibe manerantany. Tsy ilaina ny mahazo visa na mangataka visa elektronika amin'ireo toekarena lehibe manerantany dia ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina, ny Vondron Eropeana ary Etazonia. Ho fanampin'izany, ny pasipaoro Singapore dia manana fidirana tsy misy visa ho an'ny fanjakana ASEAN rehetra ihany koa.
Firenena 120 eo ho eo no mamela ny Singaporeana ankehitriny hahazo visa tsy misy visa noho ny antony manokana sy noho ny fotoana fohy isan-karazany. Ilaina matetika ny famokarana pasipaoro Singaporeana, miaraka amin'ny fetra farany ambany enim-bolana hatramin'ny daty nahatongavany, hiampitana ny sisintanin'ny ankamaroan'ireo faritany ireo.
Ny firenena sasany koa dia mila pasipaoro hahazoana fakantsary fidirana / fivoahana eo anelanelan'ny pejy banga 1 sy 2. Na izany aza, misy firenena mihoatra ny 95 mila teratany Singapour hahazoana ny visa alohan'ny handehanany, na amin'ny alàlan'ny biraon'ny governemanta na amin'ny alàlan'ny fampiharana an-tserasera fotsiny. Ho fanampin'izay, ny Singaporeana dia afaka mahazo visa rehefa tonga any amin'ny firenena 30. Firenena 120 eo ho eo izao no mamela ny Singaporeana hahazo visa tsy misy visa noho ny antony sasany sy ny vanim-potoana fohy. Ilaina matetika ny pasipaoro Singaporeana hamakivaky ny fari-tanin'ny ankamaroan'ireo faritany ireo miaraka amina fetim-bolana farafahakeliny hatramin'ny volana nidirana. Ny firenena sasany koa mila pasipaoro hahazoana pejy tsy misy soratra 1 na 2 amin'ny hajia fidirana / fivoahana. Misy firenena 95 eo ho eo izay mila ny zom-pirenenan'i Singapore handray ny visa alohan'ny handehanany, na amin'ny Internet na amin'ny alàlan'ny masoivohon'ny governemanta. Ny Singaporeana koa dia afaka mahazo visa any amin'ny firenena 30 rehefa tonga.
Lisitry ny firenena manana fidirana tsy misy visa:
Ny fidirana tsy misy Visa dia manan-kery mandritra ny 6 volana:
Ny fidirana tsy misy Visa dia manan-kery ho an'ny 180 andro
Perun (183 Andro)
Ny fidirana tsy misy Visa dia manan-kery ho an'ny 3 volana na 90 andro
Fidji (4 volana)
Koety (Hisy visa amin'ny sarany fahatongavana izay mihatra amin'ny KWD5.)
Bangladesy(Hisy visa amin'ny sarany amin'ny fahatongavany izay mihatra amin'ny USD51.)
Bolivia (Hisy visa amin'ny sarany amin'ny fahatongavany izay mihatra amin'ny USD52.)
Fidirana tsy misy visa any amin'ny faritra Schengen mandritra ny 90 andro amin'ny fe-potoana 180 andro
SingaporeVisa any Singapourvisa ho an'i SingapaoroFidirana maimaim-poana any Visa ho an'i SingaporeFirenena tsy misy Visa ho an'ny olom-pirenena Singapore
Ireo firenena mamela ny fidirana amin'ny Siriana tsy misy visa
6 Firenena misy mponina ambony indrindra amin'ny Sikhs
Fialan-tsasatra any Thailandy .. ?? Zahao ireo maso ivoho ireo alohan'ny hidinanao !!
Jolay 4, 2021